बढ्दै सुनको मूल्य, कति पुग्यो तोलाको ? | Emountain TV
बढ्दै सुनको मूल्य, कति पुग्यो तोलाको ?
काठमाडौं, २४ चैत । नेपाली बजारमा मंगलबार सुनको मूल्यमा तीन सय रुपैँयाले बढेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज तीन सय रुपैँयाले वृद्धि भई सुनको मूल्य प्रतितोला ८७ हजार र ५ सय रुपैँया निर्धारण गरिएको जनाएको छ । सोमबार सुन प्रतितोला ८७ हजार २ सय रुपैँयामा कारोबार भएको थियो ।
सुनको मूल्यमा वृद्धि हुँदा आज चाँदीको मूल्य भने स्थिर रहेको छ । आज चाँदी प्रतितोलाको एक हजार २ सय ३५ रुपैँयामा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ ।
नयाँ बर्षमा १५ कम्पनीले ५ करोड ५५ लाख कित्ता आईपीओ निष्काशन गर्दै